Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » तपाईंको लागि यो हप्ता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् हप्ताको साप्ताहिक राशिफल !
आज मिती २०७७ साल कार्तिक २३ गते आइतबार, कार्तिक २३ देखि २९ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस…
यो साता नयाँ र शुभ समाचार सुन्नमा आउला । विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ । समाजसेवातर्फ आकर्षित भइनेछ । रिस, आवेग र क्रोधलाई नियन्त्रणमा राखी काम गर्दा बढी राम्रो प्रतिफल पाइनेछ । कुनै नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,८ र शुभरङ्ग गुलाबी वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व माता बगलामुखीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा कार्यमा सफलता पाईनेछ । प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । जुक्ति तथा बुद्धिको प्रयोगले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघी बढ्नेछ । लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । धार्मिक/सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने सम्भावना रहेकोछ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,८ र शुभरङ्ग पहेंलो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिवजीको स्मरणगरी कार्य आरम्भ गर्दा सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । ढिलै भए पनि काम सम्पन्न हुनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । रोजगारको अवसर पनि मिल्नेछ । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । व्यावसायिक कार्यमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ३,५ र शुभरङ्ग रातो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि सरस्वातीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्ता मनमा कुनै नयाँ काम गर्ने विचार आउनसक्छ । रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । काम गर्ने जाँगर बढ्नुका साथै शरीर पनि स्वस्थ रहनेछ । सामाजिक सभासमारोहमा भाग लिनु पर्नेछ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,८ र शुभरङ्ग सेतो वा घिउरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व लक्ष्मीजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
साताको सुरुका दिनमा ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । प्रेमी र प्रेमिकाका बिच खिन्नता बढ्नेछ । मध्य साताबाट धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । वाहान सुख मिल्नेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,५ र शुभरङ्ग रातो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महादेवको स्मरणगरी यात्रा आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित बन्नेछ । दाम्पत्य जीवन सुखमय हुने र विश्वासपात्रले प्राय: काममा साथ दिनेछन् । छोटो यात्रा सफल नै हुन्छ । समाजमा कुरा काट्नेको सङ्ख्या बढे पनि दाजुभाइले राम्रो सहयोग गर्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,६ र शुभरङ्ग हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो हप्तामा विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ । सातको मध्यमाभने लगनशीलताको कमिले गर्दा ठूलो उपलब्धि हातपार्न नसकिएला । यो साताका लागि शुभअङ्क १,६ र शुभरङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको दर्शनगरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो सातामा कार्यसिद्धि हुने अवसर मिल्नेछ । मनोरञ्जनका साथै धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । मन लोभ्याउने पहिरनले अरूको नजर आफूमाथि पार्नेछ । मध्य सातामा भने अरुको भरपर्दा हानी हुने र विश्वास गुम्नेछ । आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,७ र शुभरङ्ग गुलाबी वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व गणेशजीको दर्शनगरी यात्रा आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो साता स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । योजना कार्यान्यनमा ढिलाइ गर्नाले आफैंपछि परिनेछ । टाउको एवं आँखा दुख्ने समस्याले सताउनसक्छ । मध्य सातामा धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । यो साताका लागि शुभअङ्क ५,९ र शुभरङ्ग खैरो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि दुर्गाजीको दर्शनगरी आरम्भ कार्य गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो हप्तामा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । धार्मिक, सामाजिक महत्वको क्षेत्रको भ्रमण हुनसक्छ । माया गरेको मानिसबाट उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । नयाँ नयाँ काम गरि समाजको ध्यान आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । जटिल ठानिएको कार्य सम्पादन हुनेछ । यो साताका लागि शुभअङ्क ४,७ र शुभरङ्ग रातो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व भैरवजीको स्मरण गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो साता मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउला । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । परीक्षा आदि प्रतिस्पर्धामा उर्तिण हुनसकिनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । मध्य साताबाट अनावश्यक झमेलामा परिएला । दैनिक व्यवहारमा खर्च बढ्न सक्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क १,८ र शुभरङ्ग खैरो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व शिव भगवानको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो साता वाहान सुख मिल्ने योग रहेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने अवसर मिल्नेछ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ । साताको अन्त्यमा अरुको भलाइका लागि दौडधूप गर्नु पर्नेछ । छोटो यात्रा सफल नै हुन्छ । यो साताका लागि शुभअङ्क २,९ र शुभरङ्ग पहेलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आफ्नो इष्टदेवताको ध्यानगरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।